စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ 𝐄𝐑𝐏 𝐒𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦 ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ရရှိလာမယ့်အားသာချက်တွေ၊ အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ရှေ့တစ်ပါတ်မှာရှင်းပြပေးပြီးပြီဆိုတော့ ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ 𝐆𝐂𝐀 ရဲ့ 𝐎𝐝𝐨𝐨 𝐄𝐑𝐏 𝐒𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦 အကြောင်းကိုရှင်း...
ဒီတစ်ပါတ်မှာတော့ 𝐆𝐂𝐀 ကနေ Work From Home ကာလအတွင်းမှာ လုပ်ငန်းတိုင်းအတွက် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုမရှိဘဲ ပုံမှန်အတိုင်းလည်ပတ်နိုင်ဖို့ ERP System ရဲ့ အားသာချက်အချို့ကို ဖော်ပြသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ 𝐄𝐑𝐏 ( ...
ကဲ covid ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းခွင်မှာ မိမိလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကို ရပ်မထားချင်သူတွေ လူအများနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရမှာကို စိုးရိမ်နေသော လုပ်ငန်းရှင်တွေသာမက ဝန်ထမ်းများပါခံစားနေရသော epidemic anxiety တွေကိုဖြေလျော့ဖို့...
ယနေ့ခေတ် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးမှာရှိတဲ့ ကျောင်းများ / သင်တန်းများ / တက္ကသိုလ် တွေမှာ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုလာကြတဲ့ e-learning system ဆိုတာ နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှုအပေါ် အခြေခံ၍ electronic devices မျ...
Online Trading Business စတင်ဖို့ စဉ်းစားနေပါသလား??? ကုန်ပစ္စည်းများကို ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်အညီ online မှ ရောင်းချဖို့ စီစဉ်နေပါသလား……? Customers တွေကို 24 hrs. service ပေးပြီး error ကင်းကင်းနှင့် ဝ...
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု တိုးတက်ပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရုံသာမက နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်း ခေတ်နှင့်အညီ တိုးတက်ပြောင်းလဲပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းအတွင်း ဖြစ်လေ့ဖ...
Covid-19 ကပ်ရောဂါတွေ ဖြစ်လာတယ်။ 😰 လူတွေ ရုတ်တရက် အပြင်ထွက်လို့ မရတော့ဘူး။ 🤨 အလုပ်တွေလည်း Work from Home မဖြစ်မနေလုပ်ကြရတော့မယ်။ 🏠 ******************************** ♦️အဲဒီအခါမှာ IT Technology ကမရှိမဖြစ်...
Covid 19 ကာလမှာ ဘာကြောင့် ERP system ကိုသုံးသင့်သလဲ နှင့် Work From Home
👉 ERP system ကို organization တွေ Business တွေမှာ လုပ်ငန်းစီးဆင်းမှု (workflow) များကို ဗဟိုမှပေါင်းစည်းပြီး စီမံခန့်ခွဲတဲ့နေရာတွေမှာ အရမ်းအသုံး၀င်ပါတယ်။ 👉 Cloud based ဖြစ်တာကြောင့် မိမိရောက်ရှိတဲ့နေရ...
Logistics Software အကြောင်း
ယခုအပါတ်အနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ Global Connect Asia Co.,Ltd ကနေ ERP Logistics Software ရဲ့အသုံး၀င်ပုံကို ဗဟုသုတ အနေနဲ့ တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ Logistics Software ဟာ ဘယ်သူတွေ သုံးသင့်တဲ့ Software လဲ ? ဘာ...
သင့်စီးပွား‌ရေး ပိုမိုအောင်မြင်ဖို့ Trading Software(ERP Myanmar) ရှိတယ်ဆိုတာ သင်သိပါသလား?
ကုန်ပစ္စည်းလက်ကျန် ဘယ်လောက်ရှိသေးလဲ မသိနိုင်လို့ စိတ်ညစ်နေပါသလား ? 🙄 ရောင်းတော့ ရောင်းရတယ် ၊ ဒါပေမယ့် ရောင်းအားအတိအကျ မသိနိုင်တဲ့အတွက် ကုန်ပစ္စည်း အော်ဒါထပ်မှာဖို့ အခက်အခဲ ဖြစ်နေပါသလား ? 🤔 တခါတရံ Expi...
Manufacturing ဆိုတာ ဘာလဲ? Odoo ERP Myanmar Manufacturing System  Manufacturing ဆိုတာ ကုန်ကြမ်း (Raw Materials) ကနေ ကုန်ချော (Finished Goods) အထိ စက်ပစည်း အဆင့်ဆင့်၊ Process အဆင့်ဆင့်တွေကိုဖြတ်သန်း...
ဘာကြောင့် Event Management Software တွေကို ပိုမိုရွေးချယ် အသုံးပြုသင့်ပါသလဲ ?
ဟိုး … အရင်တုန်းက Event Planner တွေဟာ ပွဲတွေမှာ Paper နဲ့ပဲ *registration form* တွေကို ဖြည့်စေတယ် ၊အသုံးပြုစေတယ် ။ ဒါဟာ နိုင်ငံတကာနဲ့ ယှဉ်ရင် အရမ်းကို နောက်ကျနေပါပြီ။ လူကြီးမင်းတို့ Event Pla...